FJKM Ankadifotsy SPIA 19: komity lehibe AFF / Samy hafa / Autres / Accueil - FJKM Ankadifotsy
SPIA 19: komity lehibe AFF26/12/2017 20:48
Ny 14 Desambra 2017 teo no natao tao amin'ny FJKM Analakely ny komity lehibe AFF. Asa maro no miandry ny isam-pitandremana amin'ny 2018.
Araka ny soridalan’ny FJKM : « Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara » dia navoaka ny Tetik’ Asa « 407 communes ». Ireo izany no tratrarina hananganana trano fiangonana, indrindra hanamarihana izao faha 50 taonan’ny FJKM izao. Hisy tatitra ny @ ireo fiangonana voatsangana vokatr’izany Tetik’ Asa izany any Toamasina ny 16 – 18 Aogôsitra 2018. Io Tetik’ Asa io dia vinavina hananganana trano fiangonana miisa 103 ao @ districts 12.
Dia notsinjarain’ny FJKM Foibe ary ny asa tokony atao ka districts 11 izay misy trano fiangonana 26 tokony ho hatsangana no nomena hataon’ny SPIA 19, izany hoe nomena hataon’ny AFF ny SPIA 19. Notsinjaraina indray izy io. Asa roa ( na telo ) no tena miandry antsika avy eto @ fitandremana FJKM Ankadifotsy dia ireto avy :
I-Voalohany sy faharoa ny Tafika Masina rodobe iarahan’ny AFF ny SPIA 19 manontolo izay atao any Mahaboboka district Sakaraha ( RN 7 ) ny 16 h@ 22 Aprily 2018 sy ny 11 h@ 17 Jona 2018 izay hikasana hitokanana ilay trano fiangonana hatsangan’ny SPIA 19 any an-toerana.
Momba an’io ihany dia ny volana Janoary 2018 ny pré-camp ary ny Sabotsy 9 Jona 2018 no ho famoahana ny andiany fahatelo @ mpiantafiky ny SA AFF SPIA 19.
II-Fahatelo : ny anjara voatolotra, raha sitrapon’ny Tompo, ho antsika eto @ fitandremana FJKM Ankadifotsy, dia any Berenty district Ankazoabo, mitondra ny laharana ( Référence ) hoe 10 TM 19.
Antsika ato amin'ny fitandremana, araka ny fandaminan'ny fiangonana izany no mamaritra ny fotoana mahamety ny mpiantafika ao amintsika sy ny fomba rehetra hahafahana manatanteraka izany. Marihina fa ROA no ao @ district Ankazoabo, ka ny fitandremana FJKM Andravoahangy Fivavahana no nomena ilay toerana iray hafa tsy mifanalavitra @ antsika.
Ireto no atao amin' izany, araka ny tari-dalana VAOVAO an’ny FJKM ankehitriny :
Farafahakeliny dia vitaina ny tanjona roa voalohany. Raha azo atao sy raha tratra dia vitaina ny tanjona telo. Ary arabaina manokana raha tratra h@ ny tanjona faha efatra, izany hoe izy manontolo. Izany dia tsara raha vita mialohan’ny faha 50 taonan’ny FJKM atao any Toamasina ny 16 – 18 Aogôsitra 2018, mba hanamarihantsika rehetra manokana ny zava-bita ho fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha 50 taonan’ny FJKM.
1- Fanatanterahana ny Tafika Masina any an-toerana.
2- Fananganana ny VOMM any an-toerana ( io no VAOVAO ) : Vondron’ Olona Mpiara-Mivavaka.
3- Fananganana ny trano fiangonana any an-toerana, manaraka ny lasitra DIDOMI izay trano fiangonana mitentina 5 millions d’Ariary eo ho eo monja, satria any an-toerana avokoa ny ilaina rehetra @ izany ( matériaux ), ary ny fiangonana any an-toerana no mikarakara sy mividy ny tany hanorenana ny trano. Io plan-lasitra DIDOMI io dia azo alaina ao @ AFF Foibe ny andinindininy rehetra.
4- Fananganana Asa Sôsialy any an-toerana dia Asa mivaingana ; araka izay ilain’ny mponina any @ ilay toerana. Ohatra : fampidirana rano fisotro, fananganana sekoly, tobim-pahasalamana, fiompiana tantely, omby vavy be ronono, saha famokarana, plaque-solaires, ...
Ravo Nomenjanahary ( Kômity AFF FJKM Ankadifotsy )